Lahatsoratra nataon'i Chris Bross ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Chris Bross
Asabotsy, Aprily 14, 2012 Asabotsy, Aprily 14, 2012 Chris Bross
Indraindray dia maika loatra isika hiara-manao dokam-barotra, miala amin'ny fanao tsara indrindra izahay ary tsy mieritreritra safidy hafa hisarika ny saina. Ity dia infographic avy amin'ny AdChop miaraka amina hevitra tena miavaka amin'ny famolavolana doka samihafa amin'ny fanaovana doka. Raha te hahita ny valiny izay vitan'ny mpanao dokam-barotra hafa amin'ny fampiasana teknika sasany amin'ity sary ity, zahao ireo fanadihadiana natao tamin'i AdChop - ho hitanao ny doka izay namboarina sy
Nandefa sary vaovao tsara izahay momba ny fomba fiasan'ny Google Adwords Adrank. WordStream dia namolavola an'ity infographic ity mba hampisehoana aminao ny fomba fiasan'ny Google Adwords, manome fahatakarana ny hetsika ataon'ny mpampiasa fikarohana izay mitarika amin'ny fametrahana ny doka. Google Adwords dia mitentina 97% amin'ny vola miditra amin'ny dokambarotra 32.2 lavitrisa an'ny Google! Nomen'ny WordStream - mpiara-miasa AdWords voamarina.
Nahita mpanjifa be loatra tonga tao aminay izahay taorian'ny nandaniam-bola taonina nihazakazaka nanentana ny karamany isan-tsindry (PPC). Tsy hoe tsy nihaino na nitantana ny kaonty araka ny tokony ho izy izy ireo, fa ny tsy fahafantaran'izy ireo ny fiantraikan'ny valiny sy ny fanatsarana azy ireo fotsiny. Ny ankamaroan'ny olona dia mino fa ny karama isaky ny tsindry dia ady amin'ny tolotra fotsiny ary tsy tsapany akory fa, amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny kalitaon'ny doka ataon'izy ireo, dia afaka